Lalàna mifehy ny serasera Lany tamin` ny endriny teo aloha!
Delegasionin’ny TIM Tonga nankahery ny fianakavian’i Latimer Rangers
Nodimandry teo amin’ny faha-78 taonany ny sabotsy lasa teo teto Antananarivo Rtoa Maho Anjinee Jeannette Vivyan,
Antsirabe Efa notaritaritin’ny alika ilay fatin-jazakely
Fatin-jazakely iray efa tsy nisy tapany ambany intsony no hitan’ny fokonolona nentin’ny alika omaly maraina tao amin’ny fokontany Mahafaly Vatofotsy Antsirabe, Faritra Vakinankaratra.
Ampanihy Amperin'asa ny sefo distrika vaovao
Tafapetraka amin`ny toerany ny lehiben'ny Distrikan'Ampanihy vaovao, Jovin Thomas Andriamaro.
Fidiran’ny vahiny any Nosy Be Nametraka fepetra maro ny fanjakana
Nampatsiahy ny fanjakana Malagasy tamin’ny alalan’ny ministeran’ny fitaterana sy ny fizahantany miaraka amin’ny ministeran’ny raharaham-bahiny fa misy ireo fepetra tsy maintsy arahan’ireo vahiny miasa amin’ny sehatry ny hotely ka ho avy any Nosy Be.
Ambilobe Nosamborina ilay mpanely tsaho
Lehilahy iray mpanely vaovao tsy marina sy manakorontana saim-bahoaka any amin’iny distrikan’Ambilobe iny no nosamborin’ny polisy misahana ny cybercriminalité any an-toerana.
Fanodinkodinan-tany tao Mahajanga Olona miisa 3 no naiditra am-ponja
Tompon’andraikitry ny fananan-tany tao Marovoay teo aloha 1, lefitry ny lehiben’ny faritra ao an-toerana 1 ary mpanofa ilay toerana 1 no indray nadoboka am-ponja vonjimaika taorian’ny fanapahan’ny tribonaly misahana ny ady
Fandaniana fanindroany izao atao izao rehefa nasian’ ny Antenimierandoholona­ fanovana ny andininy miisa sivy (09) tao anatin’ izany lalàna izany. Anisan` izany ny fandrarana ny famoahan` ny mpanao gazety ny adihevitra, ny tatitra na zavatra hafa tapaka tamina fivoriana tsy azo atrehin` ny besinimaro eo anivon` ireo andrimpanjakan`ny repoblika, fanovana izay nampidirina tao amin` ny andiny fito vaovao, and. faha-6 amin` io volavolan-dalàna io. Noho izany dia miverina eny amin` ny Antenimierandoholona­ izany ity lalàna lah. faha 004-2019 mifehy ny serasera ity ary tsy maintsy miverina midinika ireo fanitsiana voalaza ireo.